トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ Bilowgii bishii - bilowgii qowladda pachinko ka mid ah feature (xiliga soo kabashada, ama nolosha furan)
※ Haddii aad ku jirtay oo keliya caadaysteen in ay tagaan sida arrimuhu u ah warshadaha oo dhan in ay ka farxiyaan
qowladda pachinko in tixraaca, laakiin ma laga yaabaa in ay ku ogaaday, in qowladda pachinko ah, iyo waqtiga iyo ciyaar fudud, waxaa jiri doona oo marka ma aha . In hadlaya halka in haddii waqtiga ciyaarta, si ay u ogaadaan, in aad ka soo baxo waa lagama maarmaan si ay u qiimeeyaan qorshe ganacsi qowladda pachinko ah.
sidoo kale maqlay in industry kasta, waxaa jira wax kale oo loo yaqaan qorshe ganacsi ee qowladda pachinko ah, sidoo kale meel kasta oo qowladda pachinko ah, waxa aanu ka hawlgala oo ku saleysan qorshaha ganacsiga this. Inta ay le'eg tahay faa'iidada guud, iyo hawlgalka qorshaha meesha iyo sida aad u soo kabashada, waxaad ka arki kartaa qowladda badan pachinko istaaga bishii kowaad. Waa qorshe ganacsi ee hal bil ilaa iyo dhamaadka bisha ka bishii kowaad.
si loo gaaro sida ugu badan ee suurto gal ah qorshe ganacsi this, waxaan waqtiga oo ka mid ah waqtiga iyo ururinta dhacdooyinka, tegayaa qallafsan go'aansaday. Dabcan, sababtoo ah waa qorshe, waxaa laga yaabaa in aan shaqeeyo. Saas ma aha, xaqiiqada dhabta ah ee sida kaliya ee uma shaqeeyo waa qowladda pachinko ah. In
, bilowgii bisha qowladda pachinko waa, nooca ganacsiga ahayd si ay u tagaan, waxaan doonayaa inaan arko. Bilowgii bisha tii pachinko, waxa ay leedahay ganacsi la yaab leh kuwa Dhawrsada. Laga soo bilaabo bilowgii bishii, sababtoo ah waxaan ma soo saari karaan khasaare. sixitaanka ciddiyaha, dukaamada caadiga ah sixitaanka ciddiyaha waqtiga waa aasaasiga ah ee, ay u badan tahay ka soo baxay si ay u arkaan miiska macluumaadka aad u yar giijisan ka dhigi lahaa.
Afyare Isla sidaas u dhaqmaan, in kiisaska intooda badan, dhigay 1, si miiska loogu tahay soo baxay, aad leedahay Uchinaoshi ama la mid ah oo ay goob la mid ah. Bilowgii bisha iyo waa at tii pachinko, pachinko labada Afyare, hortago Desugi lama filaan ah, waa Awayokuba waqti isku dayaya in ay kayd qorshe ganacsi ama in ka badan faa'iido guud.
Sidaas daraaddeed, waxa uu noqon doonaa waxa ay noqon iibka dadban.
dabcan, macnaheedu ma aha in dhaqaaqi doono sida mishiinka Waxaan u maleeyay, sidoo kale waxaa jira dhacdo in ka soo bixi doonaan. Si kastaba ha ahaatee, xitaa marka sida, inta badan waa aan ama la adkeeyo ciddiyaha buuxda, waxaa sidoo kale waa in la arko sida ay u istaagaan. Total iyo Markii aan, tii pachinko arrinta gaas-raran bilowgii bisha ay u badan tahay in ay noqon yar. Kaliya, si ay u ilaaliyaan xawaaraha caadiga ah ee ganacsiga.
, waxaa jira hal dhibic Waxaan doonayaa in ay diiradda saaraan.
, bilowgii bisha qowladda pachinko waa xaqiiqada ah in gobolka ganacsiga caadiga ah ee dukaanka. Aan xitaa diyaar u yahay inuu ku riday ilaa, laakiin meesha sida waa sida no maanka in la xoojiyo dib u soo kabashada, ilaa ay jirto. Qof kasta oo ka mid ah dukaamada in ay yihiin doonayaa inuu ciyaaro caadi ah ciddiyaha hagaajin iyo goobaha xaaladda waa, waxaa kale oo jira waqti u muuqata in nololi. Bilowgii bishii waa, waxaa laguugu yeedhi karaa waqtiga waa ka fiican, kaas oo lagu arkay inta badan si ay u ogaadaan dukaanka. Xataa sixitaanka ee ciddiyaha
, markii viewed marayo hal bil ah, gaar ahaan bilowga bisha xaaladda, u furan ay tahay, waxay kuu sahlaysaa in ay xukun ka mid ah waxaa la adkeeyay. Si kastaba ha ahaatee, tan iyo markii uu gaas-dukaamo ma kala duwana ku filan, waa natiijada in maal aad u badan, waa wakhti aan la talinayaa karaa. Bilowgii bishii, iyada oo aan kulan weyn, inaad si fiican u xaaraan ah in si ay u dhawraan tii pachinko ah.
dabcan, sababtoo ah waa wakhtiga weyn ma aha fikirka ah in dib u soo kabashada, haddii aad halkan ugu adeega, aad mararka qaar isku daya inay ku dhuftay. In lagu soo qabto bilowgii bishii, markii ciyaarta hal bil ah, isku day in aad si adag u garto. Waa markii in taam ma noqon karo. Bilowgii bishii, iyada oo aan kulan weyn, inaad si fiican u xaaraan ah in si ay u dhawraan tii pachinko ah.
dabcan, sababtoo ah waa wakhtiga weyn ma aha fikirka ah in dib u soo kabashada, haddii aad halkan ugu adeega, aad mararka qaar isku daya inay ku dhuftay. In lagu soo qabto bilowgii bishii, markii ciyaarta hal bil ah, isku day in aad si adag u garto.